ओलीलाई सुधीर चौधरीको प्रश्न– नेपालले भारतलाई ठूल्दाइ मान्न छाडेकै हो ? – Nepal Press
ओलीलाई सुधीर चौधरीको प्रश्न– नेपालले भारतलाई ठूल्दाइ मान्न छाडेकै हो ?
२०७७ पुष २७ गते १६:०९
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विदेशी मिडियालाई अन्तर्वार्ता दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता लिन जी न्यूजका प्रधान सम्पादक सुधीर चौधरीसहितको टोली अहिले काठमाडौंमा छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै पुगेर चौधरीले अन्तर्वार्ता लिएका छन् ।
‘छिमेकी नीतिलाई लिएर अहिले नेपाली प्रधानमन्त्रीको दिमागमा के चलिरहेको छ ? भनेर जान्नु महत्वपूर्ण हुनेछ’ सुधीरले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, ‘नेपाल किन भारतसँग ठूल्दाइको जस्तो व्यवहार गर्न चाहँदैन भन्ने विषयमा निकै महत्वपूर्ण कुराकानी भयो ।’ कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नेपालले चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतीय संस्थापन निकटको जी न्यूज नेपाली प्रधानमन्त्रीविरुद्ध खनिएको थियो ।
सोही क्रममा चुच्चे नक्साको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएकी अभिनेत्री मनिषा कोइरालालाई चौधरीले विवादास्पद ट्वीट गरेका थिए । साथै, नेपाल चीनसँग नजिकिएको आरोप लगाउँदै चौधरीले लेखेका थिए । तर, व्यापक विरोधपछि चौधरीले माफी माग्दै ट्वीट हटाए । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली माघ १ गतेदेखि भारत भ्रमणमा निस्कँदैछन् ।
प्रकाशित: २०७७ पुष २७ गते १६:०९